देहघाटकी मायाप्रेमबाबुले मायालाई बजार बनाइदियो।
मेमसाहेब बनाउँछु भन्थ्यो, मैनको पुत्ला बनाइदियो।
'मेरी गुलाब, मेरी गुलाब' भन्दाभन्दै सार्वजनिक सयपत्री बनाइदियो।	त्यो 'म्याक्रो' मुस्कान'म्याक्रो मुस्कान' क्या सुहाउँथ्यो उनलाई। म्याक्रो अर्थात् बृहत् अर्थात् विशाल। त्यो जिउँदोजाग्दो, त्यो भव्य र त्यो म्याक्रो मुस्कान! 'माइक्रो' (बस) को टायरले कुल्चिदियो त्यो म्याक्रो मुस्कानलाई। (म्याक्रोको विपरीतार्थ माइक्रो!) अप्सनाको अभिनय प्रेमफिल्म 'समय'मा ब्याक डान्सर बनेर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी इटहरीकी अप्सना न्यौपाने अहिले म्युजिक भिडियो र फिल्ममा जम्न थालेकी छिन्।	नक्कली 'मिस नेपाल'मिस नेपालमा भिड्ने उमेर अभिनेत्री शुभेच्छा थापाको होइन, उनकी छोरीको भएको छ। तर, १६ वर्षे छोरीकी आमा शुभेच्छा अचेल मिस नेपालमा भिडिरहेकी छिन्। उसो त आफूलाई मेन्टेन गरेकै कारण जवान...	मलेसियन भिसामा नयाँ किचलोमलेसियाले नेपाली कामदारका लागि भिसा प्रक्रियामा नयाँ किचलो उत्पन्न गराएको छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई बिदामा घर आएर फर्कंदा हस्तलिखित र एमआरपीमा भिसा र पुनः श्रम स्वीकृति भए पनि हस्तलिखितबाट...	भद्रगोलमै ठिक छु: रक्षा श्रेष्ठनेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको हास्य टेलिसिरियल 'भद्रगोल' का चर्चित पात्र जिग्रीको पछि लागिरहने अर्की पात्र छिन्, रक्षा। ग्रामीण भेगकी युवतीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी रक्षा श्रेष्ठ काठमाडौँ, चाबहिलकी रैथाने बासिन्दा हुन्।...	मन-मनमा दसैँबजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ। काठमाडौँ बाहिर जाने बसका टिकटहरू बुकिङ हुन थालिसकेका छन्। ठूला कम्पनीले छुट तथा उपहार योजना ल्याइसकेका छन्। अर्थात्, दसैँले नेपालीका आँगन टेकिसक्यो। 'मौन' नम्रतामन लागेका कुरा चाहेर पनि अभिव्यक्त गर्न नसक्नु कति पीडादायी हुन्छ होला? त्यसमाथि प्रेमका कुरा गर्नु त झन् कठिन! त्यसको अनुभव बटुलेकी छिन्, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले। चुपचाप सुटिङ सकाएको फिल्म...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...